Amagumbi, amagumbi angatshatanga, amagumbi ekwabelwana ngawo, iLingen - I-Airbnb
Amagumbi, amagumbi angatshatanga, amagumbi ekwabelwana ngawo, iLingen
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguMalte
I-92% yeendwendwe zakutshanje inike uMalte iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ibekwe ngokugqibeleleyo kwiziko lelali yaseAltenlingen. Uqhagamshelo olufanelekileyo kumbindi wesixeko, iindawo ezahlukeneyo zorhwebo kunye neyunivesithi. Umsele kunye nee-Ems zikumgama wokuhamba. Amagumbi asanda kulungiswa. Ikhitshi kwabelwana nabanye abantu abathathu. Igumbi lokuhlambela likwabelwana nelinye igumbi.
Igumbi lokulala, igumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo, ikhitshi ekwabelwana ngalo. Kukwakho negumbi lokucoca kunye nenkundla encinci yangaphambili enebhentshi phambi kwendawo yokuhlala.
Kwindawo ezolileyo. Indawo yokuhlala ibekwe ngasentla kweGasthaus Timmer eAltenlingen. ULidl, uAldi kunye nombhaki banokufikelelwa ngebhayisekile kwimizuzu emi-5. IYunivesithi ngebhayisekile kwimizuzu eyi-10-15. Isikhululo sebhasi singaphandle kanye kumnyango wangaphambili.
Umbuki zindwendwe ngu- Malte
Ndikhangela ngaphakathi / ndiphuma kwaye ndiyafumaneka ubusuku nemini ukuphendula nayiphi na imibuzo. Ngaphandle koko ndinika iindwendwe inkululeko yazo kwaye andikho kwisiza.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lingen (Ems)